Gaadhida badbaadada leh iyo FAQ-yada kale ee loogu talagalay dadka cunnada qaata - Cunnooyinka ku socda wheels
Geyn aamin ah iyo su'aalo kale oo la iska waydiiyo dadka cuntada qaata
Adeegga cuntada ma sii socon doonaa?
Haa, goobaheena cunada la geeyo iyo mutadawiciinteenu waxay sameynayaan wax walba oo aan kari karno si aan u sii wadno gaarsiinta cuntada inta cudurku socdo. Si kastaba ha noqotee, qaatayaasha waa inay filayaan xoogaa isbeddelo ah gaarsiinta heerka. Kuwa awooda waxaa laga yaabaa in laga codsado inay aqbalaan in badan oo ka mid ah cuntada la qaboojiyey keenaan si loo kululeeyo waxyaabaha qaaska ah qaarkoodna ay u lahaan karaan helitaankoodu xadidan yahay.
Haddii aadan hadda helin cunto laakiin aad jeceshahay inaad bilowdo, waxaan qaabilaynaa macaamiil cusub. Waxaad iska qori kartaa halkan.
Sideen ku ogaadaa inay cuntooyinku ammaan yihiin in la cuno?
Marka lagu daro dhaqamadeena maalinlaha ah ee la tacaalida cuntada, waxaan shaqeeynay dhowr talaabo oo firfircoon si aan u ilaalino qof walba oo ku lug leh diyaarinta iyo bixinta cuntada iyo yareynta faafida cudurka.
Sida laga soo xigtay CDC iyo khubarada caafimaadka, ma jiraan wax yar oo khatar ah oo ah in COVID-19 lagu dhex mariyo cuntada. Hadday ahaan lahayd cunnadeenna ama cunnooyin kaleba, si fiican u dhaq gacmahaaga intaadan wax cunin.
Sideen ku xaqiijiyaa gaarsiinta aaminka ah?
Wadayaasha alaabada gaarsiinta ayaa garaacaya albaabkaaga, cunnooyinka saaraya albaabka ama miiska albaabka agtiisa waxayna dib ugulaaban doonaan masaafo ugu yaraan 6 fuudh ah. Haddii aad jeclaan lahayd, waxaad hadal ahaan ugu qiran kartaa mutadawiciinta inaad halkaas joogto oo aad u sheegtid inay caadi tahay in laga tago. Tabaruceyaashu sidoo kale way soo wici karaan si ay kuu ogeysiiyaan alaabada si aad u siiso tilmaamaha saxda ah.
Haddii aad ku nooshahay guri dabaq ah, fadlan la xiriir maamulka dhismahaaga wixii ku saabsan borotokoollada saxda ah ee aqbalaadda keenista. Waad soo wici kartaa goobtaada wax lagu geeyo oo waxaad siin kartaa tilmaamo gaar ah oo loogu gudbiyo tabaruce.
Maxaan sameeyaa haddii aan isku arko astaamaha COVID-19?
Haddii aad isku aragto astaamo daran sida neefta oo kugu gaaban, wac 911. Haddii calaamadahaagu khafiif yihiin, la xiriir daryeel caafimaad bixiyahaaga. Bixiyeyaal badan ayaa dajiyay baaritaanka taleefanka, sidaas darteed wicitaan taleefan kahor intaadan galin ayaa lagula talinayaa. Siintaada cuntada, codso in cuntadaada looga tago banaanka albaabkaaga si looga hortago faafida cudurka.
Waxaan u baahanahay inaan cuntadayda hakad geliyo maxaa yeelay guriga ma joogi doono. Maxaan sameeyaa
Waad u wici kartaa cunnadaada bixiyaha Wheels si aad ugu sheegtid inaad u baahan tahay joogsi. Haddii aadan aqoon lambarka goobta aad ku gaarsiinayso, naga soo wac lambarka 612-623-3363. Waxaan ku farxi doonnaa inaan dib u bilowno adeegga markii aad awoodi doontid inaad mar labaad cunto hesho.